Chokoreti Lab Mazita: Rondedzero Yemazana mazana mashanu+ Akanyanya & Akakurumbira Mazita - Mazita Embwa
Chokoreti Lab Mazita: Rondedzero Yemazana mazana mashanu+ Akanyanya & Akakurumbira Mazita
Nenguwo dzavo dzakanaka dzejena nehunhu hwavo hushamwari, hazvishamise kuti maChocolate Labs anofarirwa nevanhu vanotsvaga imbwa!
Kana iwe uri kuunza Chokoreti Lab kumba munguva pfupi, ipapo iwe uchazonyatsoda yedu inoshamisa runyorwa rweanopfuura mazana mashanu Chocolate Lab Mazita!
Pane nzvimbo zhinji dzekuwana kurudziro - kubva pasirese yezvisikwa kune mazambiringa echinyakare mazita.
Tarisa uone kuburikidza neyedu zvinyorwa kuti uwane zita rakaringana reChocolate Lab.
Tine chokwadi chekuti unoshuva kusvetuka wakananga mune yedu runyorwa rweChocolate Lab Mazita. Nekudaro, kana iwe uchirwisana nesarudzo, kana uchida nhungamiro inokurumidza, tevera aya matipi makuru mana ekuchengetedza zvinhu zvinakidze uye zvakapusa:
Ita rako reChokoreti Lab zita sarudzo seinonakidza sezvaungaita nekugadzira uye kunakidza!
Shandisa yako Chocolate Lab's hushamwari uye hwakavimbika hunhu kumutsa marudzi ese ehunyanzvi.
Kana yako Chocolate Lab iri kuuya kumba kune zvinopfuura iwe chete, izano rakanaka kubvunza vamwe vari mumba.
Iyo Chocolate Lab inorumbidzwa neyakafuma brown brown jasi uye ivo kazhinji zvakare vane yakajeka uye akanaka maziso. Aya ese ari maviri makuru ekutanga mapoinzi ekutsvaga ekugadzira uye ane mavara mazita.
Varume Chokoreti Lab Mazita
Mazita echikadzi Chocolate Lab Mazita
Yakasarudzika Chokoreti Lab Mazita
Anonakidza Chocolate Lab Mazita
Akanaka Chocolate Lab Mazita
Akanakisa Chokoreti Lab Mazita
Kana iwe uri kuunza kumba yechirume Chokoreti Lab, iwe urikufunga zvakanyanya kufunga nezve izvo zvekutumidza mwana wako mudiki!
Tinoda pfungwa yekushandisa echinyakare uye makuru mazita echirume zvinoshanda zvakanaka pavanhu nembwa.
Wadii kuenda kune zita rakanaka remazambiringa, kuratidza rudzi rwakareba rwekuve imbwa inodikanwa kwazvo muAmerica?
Isu tinonamatawo zano rekushandisa zita rine simba, rehurume zvirevo - izvi zvinoita kuti vanhu vazive kuti imbwa yako inguva yekumhanyisa!
Tarisa uone urwu runyorwa kuti uwane mamwe mazano makuru uye kurudziro:
Ralph - Iri rakanakisa uye ipfupi zita rakanaka kune Chocolate Labs. Icho chekare cheNorse zita rinoreva mhumhi ; iyo inokodzera imbwa yako yakasimba, murume!
Johani Maverick Kana Iain
Nolan Tito Noa Jeremy
Jay Timoti Victor Runako
Nyamavhuvhu Felton Francis Arthur
Rubheni Edmund Oswald Damien
Jasoni Benji Danny Sirasi
Asheri Landon Tristan Cedric
Kai Elliot Zane Razaro
Jakobho Rufusi Charles Duncan
Amell Abheri Gordy Ethan
Byron Lars Natani Robert
Mukana Neville tsime rezita rokutanga Clifford Colton
Michael Milo Revhi Tag
Dallin Pasi Ronda Oliver
Maraki Wes Clement James
by Curtis Lancelot Ollie
Uri kuunza mukadzi chokoreti Lab kumba munguva pfupi iri kutevera?
Kana iwe uri, iwe ungangodaro uchifunga nezve ese makuru mazita aripo kusarudza kubva!
Tinoda kushandisa nyoro uye mazita manyoro ine chirevo chechikadzi kuratidza hunhu hwakanaka hwemuchindakadzi wako.
Iwe unogona kuenda kune zita rekare fashoni iro rine mabhakiti eiyo vhezheni charm - ivo vari kuwedzera uye vanozivikanwa mazuva ano nezvipfuyo nevana zvakafanana.
Wadii kushandisa zita rechinyakare remusikana iro rinopfupikisa runako rwechikadzi rweChocolate Lab?
Sadie - Tinoda iri rakanaka, zita remusikana. Icho chiri chechiHeberu mavambo uye zvinoreva 'muchindakadzi', inoenderana nemukadzi wako anotungamira.
Runako Sammie Fibi Mary
Alice Sophie Dherira Emma
Olivia Jill Tortoiseshell Mary
Freya Haley Esteri Sasha
Lottie Tariro Tilly Letitia
Jane Aline zvakajeka Ramona
Helena Kinsley Nyeredzi Sadie
Gwen Rea Daphne Melanie
Jojiya Sara Liliana Harriet
Felicity Talullah Zino ChiFrench
Nora Vakararama Cathy Dorothy
Ida Nyasha Kitty Isabel
Kubvumirana Khloe Caroline Jess
Joanna Beatrice Cora Kubvumbi
Emilia Zara Kutenda Allegra
Vamwe vanhu vanobuda chaizvo-uko kana vakatarisa mazita embwa dzavo .
Kana izvi zvichirira senge iwe, saka kune nzvimbo zhinji dzekuwana dzakakura, dzakasarudzika mazano.
Tinoda pfungwa yekushandisa yekunze nzvimbo sosi yekufemerwa, sezvo paine akawanda anotonhorera kurira kwepuraneti kunze uko!
Wadii kushandisa zvakasikwa uye uwane chimwe chinhu chakanaka uye chisingawanzoitika?
Isu tinodawo yakasarudzika uye imwe nzira zviperengo zvinonyatsoisa zita rembwa yako kunze kwevamwe. Shandisa iri runyorwa rweakasarudzika uye wacky mazano kuti uwane chimwe chinhu chakakosha chaizvo:
Comet - Kana Chokoreti Lab yako iri inopenya pup uye inomhanya mhanya, wadii kuitumidza mazita nyeredzi isingawanzo ? Iri zita rakasarudzika zvechokwadi.
mambakwedza Anemone Despina Altair
Aires Saiph Antares Nyeredzi
Taurus Beta Petal Atmosi
Capricorn Begonia Zoey Zhizha
Scorpio Kayti Zuva Heather
Nyeredzi Bellatrix Rwizi Hazel
Lunar Miya Jaxson Hurungudo
Shizha Hukura Oceana Jupiter
Kolton mhanza Gemini Elara
Rose Hilda Kutumbuka Juno
Gamma Kubata Sango Frost
Dutu Canopus Dione Evanthe
Lilian Symon Kurume Tulsi
Camren Chapel Saturn Elio
Delta Orion Matsutso Rukato
Gore Galileo Coral Miranda
Noa Bhati Vera Cailyn
Mvura Deneb Faye Murazvo
Nyowani Bracken Meadow Cordelia
Renyeredzi Samusoni Dombo Arufa
Uri kutarisa here kuita kuti vanhu vaseke pavanonzwa zita rembwa yako? Kana kuti pamwe iwe unongoda iro rakareruka-moyo zita?
Unogona kusarudza zita rinosekesa rako reChocolate Lab kuti uve nechokwadi chekuti vanhu vazive mwana wako ane pfungwa yekuseka.
Isu tinoda zano rekushandisa mazita echikafu chembwa, sezvo izvi zviri zviviri zvinonakidza uye zvinosetsa. Wadii kushandisa punny mazita, kana mazita angori akajeka mapenzi?
Isu tinodawo kutumidza imbwa zvinhu izvo zvinowanzo shandiswa kune dzimwe mhuka, kuwedzera unoshamisa muganhu!
Tarisa kuburikidza nerondedzero iyi kuti uwane rumwe rutivi rwunopatsanura mazano emazita anonakidza eChokoreti Lab.
Mary Puppins - Isu tinonyatsoda rino hilarious punny zita - kutenderera pane 'Mary Poppins'! Kana iwe uchida zita rinosekesa, ichi chingave sarudzo yakanaka.
Cracker Kunonoka Squarker Pizza
Chewbarka Sherlock Mapfupa Bugs Yowler
Marshmallow Bunny Virginia Woof Mhiripiri
Nzwara Zvikwekwe Santa Paws Salami
Doodles Nguruve Chutney Pepperoni
Awa Huru Burger Howler
Trifle Taylor Pawtner Tomato Huku
Harry Paw-ter Meatball Ndebvu Chuckles
Noodle Jiggly Mahwindo Zvishandiso
Britney Nzeve Cottontail Chilli Katsi
Sandwich Nesafironi Minhenga Winnie the Pooch
JK Kurira Dumpling Muvungu Nyati
Zvinyorwa Sravana Sameeralu Serial 4th Indiana Bones Chipenga Celery
Karoti Avocado Beaky Applesauce
Purr Ron Fleasley Karl Bark Kusvetuka
Lollipop Mudiwa Tapenade Ranch
Nzungu Spaghetti Olive Cleo-Paw-Tra
Kune mamwe mazita akanyatso kukodzera uye akanaka kune Chocolate Lab.
Kana iwe uchitsvaga zita rakadai, saka kune nzvimbo zhinji dzekuwana kurudziro.
Chocolate Labs inozivikanwa ne nguvo dzavo dzakapfuma, shava . Wadii kuenda kune zita rinoratidza iwo akanaka iwo mavara?
Labradors vane mukurumbira nekuve anodikanwa uye ane ushamwari , saka tinofunga kuti zvingave zvakanaka kusarudza zita kubva kune chero tsika kana mutauro zvine chirevo senge 'shamwari' kana 'akavimbika'.
Isu tinodawo mazita ehunhu, sezvo dziri nzira huru dzekukudza hunhu hwembwa yako. Tarisa kuburikidza nerondedzero iyi kuti uwane zita rakanaka reChocolate Lab.
Lexa - Iri pfupi uye rakanaka zita nderaCzechoslovakian mavambo. Iine chirevo chakakura - 'mudziviriri wevanhu'. Kana Chocolate Lab yako yakavimbika , iri izita rakanaka kwavari.
Colesha Festo Winifred Nelwin
Shock Alyson Maite Pal
Mufurakisi Unwin Jojo bhurawuni
Runako Caraf Brunette Auden
Birch Kudenga Kafi Nalan
Kyla Edina Kururamisira Chikwama
Rudo Bhinzi Kokonati Siran
Cherie Denbeigh Bonamy Bheya
Suki Acorn Muswe Orva
Goverana Lovell Nicole Lexa
Hadwyn Kutendeseka Order Alie
Cappuccino Teak Une mhosva Yakataurwa
Rugare Hickory Abdo Ellone
Shamwari Fido Whisky Oatmeal
pumpernickel Moose chikumbaridzo Jebhedhaya
Java Truman Tsoko Inowedzera
Kudzikama Arubha shamwari Simuka
Taupe Pine Izvi Brandy
Bhora Umber Cocoa Agatha
Pretzel Jonda Mocha Mukaka
Kana iwe uchitsvaga rakanyanya kunaka zita reKokoreti Lab yako, saka isu tine mamwe anoshamisa mazano.
Wadii kusarudza chimwe chinhu chakaedzwa uye kuyedzwa?
Unogona kushandisa zita reLabrador rine mukurumbira, kana zita rembwa yemukurumbira.
Wadii kuenda kuzita rinoratidza iro rakanakisa reChocolate Lab yako, ingave iri simba ravo risingaperi kana runako rwavo runoshamisa.
Isu tinodawo pfungwa yekushandisa mazita evateedzeri vane hunhu hwaunoona hunoratidzwa mumhuka yako yaunoda. Shandisa iri runyorwa kuti uwane iyo zita rakanakisa Yako Chocolate Lab.
Mabel - Iri rinoshamisa zita reLatin ndiyo sarudzo yakanakisa yeLokoreti Lab. Zvinoreva kuti 'akanaka, anodikanwa', ayo anoratidza hunhu hwechipfuwo chako.
Genevieve Munguva pfupi Kurwisa Mabel
Alayne Mercury Vakararama Kevra
Musoro Lucy Chete Sophie
Kisimusi Kalliope Nadal Libbie
Tabea Bridgit Ngarava Jacinda
Elvis Runako Bhanditi Spencer
Charuhas Vito Yeva Kubvumirana
Guruva Donatella Olene Emiko
Taylor Runako Sushma Kiah
Chum Cosmin Amra kubereka
Daisy Deen Kubwinya Zaina
Neleh Hupenyu Ruboshwe Merlin
Zoie Ramya Barfy Rarama
tsvuku Manha Calanthe Leana
Jemila Iye wachi Turbodog
Miyu Chiratidzo Rover Lalit
Beldan Pete Taruni VaZuma
Tea Bonnibel Jilian Sundari
Kana iwe uri kuunza Chokoreti Lab kumba munguva pfupi iri kutevera, chinetso chekuvatumidza mazita ndechechokwadi kuve mupfungwa dzako.
Kunyangwe iwe unotarisa kumazita echisikigo, kana mazita akanaka kubva kune mimwe mitauro , pane chokwadi chekuve nechimwe muzvinyorwa zvedu chinogona kukubatsira!
Ita shuwa yekutizivisa kana iwe ukashandisa chero ezita reChocolate Lab mazita mune aya mazita.
Isu tinodawo kuda kunzwa kana iwe uine chero mazano emazita asina kutaurwa pano, saka ive shuwa kusiya komendi.
8 Mhumhi Imbwa Inosanganisa: Pedzisa Rondedzero Yembwa Dzinotaridzika Semhumhi
Iyo Malamute Pitbull inosanganisa imbwa imba yemagetsi iwe yaunoda?
ndine imbwa ipi
imbwa mazita embwa chena
marudzi akasiyana epitbull bloodlines